खगेन्द्र बा ! शिर्शिकोटमा बगेको रगतको सम्मान होस् भन्ने चाहान्छौं « Sansar News
खगेन्द्र बा ! शिर्शिकोटमा बगेको रगतको सम्मान होस् भन्ने चाहान्छौं
१० जेष्ठ २०७४, बुधबार ०३:१५
बधाई साथै सफल कार्यकालको शुभकामना नब निर्बाचित पैयुँ गाउँ पालिका प्रमुख पर्बतका श्री खगेन्द्र प्रसाद तिवारी (खगेन्द्र बा) तथा जसमति दिदि , महेन्द्र , राजुलगायत सबै विजयी टिमलाइ बधाई साथै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
खगेन्द्र बा, चुनाउ जित्नु भएछ खुशी लाग्यो । चुनाउ नेपाली कांग्रेसले जितेको भन्दा पनि तपाइले जितेकोमा बढी खुशी लाग्यो । किन धेरै खुशी लाग्यो मलाइ थाहा छैन । तपाइलाइ थाहै छ म नेपाली कांग्रेसले चुनाउ जिते हुन्थ्यो भन्ने सपनामा पनि सोच्दिन । मैले सोंचे भनेर तपाइँसँग भने पनि पत्याउनु हुन्न । तुलनात्मक रुपमा तपाइँ कांग्रेसभित्रको लोक प्रिय मान्छे हो र त्यो साखलाई अहिले सम्म खोलामा बचाएर राख्नु भएको रहेछ ।
पंचायत कालभरी जिपंस बा (यज्ञ प्र तिवारी) हजारौं पटक कुश्मा र सरौंखोला ओहोर दोहोर गर्नु भयो । सयौं जोर जुत्ता फटाउनु भयो । तर, कुश्माले केहि दिएन । पर्बतको दक्षिण सधैं हेपियो । चेपियो । र दुर्गम बन्यो । न त डम्मर बहादुर मल्लले दक्षिणलाइ बिकासको कुनै दक्षिणा दिए न क्षेत्र ब गुरुङले । काशिनाथ न्यौपाने, मन बहादुर राना, महेन्द्र प्रताप सेन, कर्ण प्रताप सेन, धन बहादुर राना, मेजर भिम बहादुर राना लगायत दर्जनौं आदरणिय अग्रजहरुलाई उत्तरका नेताहरुले बर्षौ सम्म झोला बोकाए । तर दक्षिणमा शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा र बिकासका पूर्वाधारमा कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन । अहिलेको विस्वब्यापिकरणको युगमा उत्तर र दक्षिण भनेर लेख्दा अलि असहज त होला नै, तैपनि यो प्रसंगलाई तपाई लगायत हार्ने जित्ने सबैलाई भोट दिने आम मतदाताले स्विकार्छन भन्नेमा म ढुक्क छु ।
बैचारिक र नीतिगत सोंचले भने अब हामीले उत्तर दक्षिण सोच्ने बेला यो होइन । किन की ११ बर्षे संसार हल्लाउने महान जनयुद्ध र ०६२ र ६३ को जन आन्दोलन पछि सेती र मोदीमा थुप्रै पानी बगी सकेको छ । अझै पनि बास्तबिक ब्यबहारमा काठमांडूले कर्णाली हेर्ने र कुश्माले दक्षिण पर्वत हेर्ने सोंचाईमा खासै भिन्नता रहेको छैन । यसो भनि रहंदा मैले स्वं काशिनाथ न्यौपानेलाइ झल्झली सम्झेको छु। सायद २०३७ सालको बैसाखको अन्त्य तिर हो । पुलामी बाजेको चिया पसलमा उहाँले भन्नु भएको थियो, ‘केटा हो धेरै राजनीति नगर, मैले कुश्मा यहि खोलामा लिएर आउंछु, त्यति बेला जे गर्ने हो गरौला ।’ उहाको यो भनाइ भित्र ठुलो पिडा लुकेको रहेछ भन्ने कुरा अलि बर्षपछि हामि बुझ्दै गयौं । हामीले बुझ्दा उहाँले यो संसार छाडी सक्नु भएको थियो । जिल्ला पंचायतको उपसभापति हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यति बेला । कुश्माले गरेको विभेदको पिडा उहाँले मज्जाले अनुभूति गर्न पाउनु भएको रहेछ ।
खगेन्द्र बा !
अब त काशिनाथको ‘कुश्मा’ खोलामा हैन तपाइकै झोलामा आइ सक्यो । भन्नेमा सायदै दुइ मत होला । दक्षिण पर्वतको बिकास निर्माण र सम्बृद्धिमा कुश्माले जहिल्यै पिठ्यु फर्काएको तितो अनुभब स्वं टेक बहादुर आलेले पनि धेरै पटक ब्यक्त गर्नु हुन्थ्यो । अफसोच अहिले सिंहदरबार मर्दिखोलामै आएको सत्य कुरा देख्न भने उहाँले पाउनु भएन । शिक्षाप्रेमी हरि प्रसाद श्रेष्ठ , दल बहादुर श्रेष्ठ , महेन्द्र प्रताप सेन, बिर प्रताप सेन, देवाखर न्यौपाने, समेतलाई यति बेला तपाइंको बिजयको घडीमा सम्झन मन लाग्यो ।
पैञ्युखोलालाइ सम्बृद्ध बनाउने रहर मनमा हुँदा हुँदै अन्य धेरै समाज सेवी, शिक्षा प्रेमी अग्रजहरुले यो धर्ति छाडीसक्नु भएको छ । सरौंखोलाको बिनु नि मा बि मा पढाउदा पढाउँदै धेरैपटक कक्षा कोठामा पानि चुहिएर बिद्यार्थी सार्दै पढाउदै गरेको तितो अनुभब म संग छ । त्यति मात्र होइन आधा जसो बिद्यार्थीलाई बस्ने काठको मुढो सम्म थिएन । त्यहि समयमा कुश्माले लमाए भन्दा पारिका स्कुलहरुमा बर्गेल्ति सुविधाहरु उपलब्ध गराएको थियो । काहुँ थोत्रो कोलको स्कुलको बिषयमा त झन कुरै नगरौं । २ हप्तासम्म बसेर कुश्माको भात खाँदा पनि लक्ष्मी नारायण सापकोटा रित्तै हात फर्किनु हुन्थ्यो । जस्ता पाताको हल्ला चुनाबको बेलामा मात्र सुनिन्थ्यो। ‘कति पैसा पर्छ हो यी दक्षिणका भेडा किन्न ?’ भनेर (उत्तर तिरका ठकुरी रास्ट्रीय पंचायत सदस्यले लुंखु देउरालीमा आफ्ना सहकर्मी जनजातिका मनोनित रा प स संग सायद ३८ सालमा हुनुपर्छ) सोध्नु भएछ । तत्कालिन समयमा यो कुरा दक्षिण पर्बतका बच्चादेखि बुढा सबैको मुखमा चर्चाको बिषय हुन्थ्यो ।
तपाइलाइ त झन मज्जाले थाहा छ । अब रैती र भेंडाबाट पैयुँका बासिन्दाहरुले मुक्ति प्राप्त गरि सकेका छन । त्यो मुक्ति आन्दोलनमा हामीले पनि परिवारको होनहार गहना भाइ कृष्ण प्रसाद गौतमलाई बलि चढाएका छौं । अबको ५ बर्ष हाम्री बुहारी बिष्णु र बाल बच्चाहरुले खाना खाएर सुते कि भोकै सुते भनेर कहिलेकाँही सोध्नु होला । फुर्सद निक्लेन भने वाड अध्यक्ष महेन्द्र श्रेष्ठलाई सोध्न लगाउनु होला । तपाइलाइ पैयु गाउँपालिकाको अध्यक्ष बनाउने सबैभन्दा ठुलो श्रेय अहिलेका मतदातालाई भन्दा हाम्रो भाइलाई जान्छ । शिर्शिकोटमा बगेको रगतको सम्मान गर्नु हुन्छ भन्ने बिश्वाश लिएका छौं ।
प्रसङ्ग सरौखोलाको र थोत्रो कोलको स्कुलको आए पनि सन्दर्भ भने पैयु गाउँपालिका भित्र पर्ने सबै स्कुलको हो भनेर बुझ्नु होला । जनतालाई बास्तबिक रुपमा सिंहदरबार आफ्नै घर आगनमा आएको भनेर सुनाइएको छ अब त्यसको बास्तबिक प्रयोग गराउने नेतृत्व तपाई र तपाइको टीमको हो । समयको जतनपुर्बक सदुपयोग गरेर जनतालाई सिंहदरबार आफ्नै घर आगनमा आएको अनुभूति दिलाउन सक्नु भयो भने इतिहाँसले तपाइँ र तपाइको टीमलाई अन्याय गर्ने छैन । पैयु गाउँपालिका अन्तर्गत श्रीजना हुने रोजगारीमा, अबसरमा ,न्याय र कानुनमा राजनीतिक गन्ध नआउने गरि काम गर्नु हुने छ । सहिद परिवारका नाताले हाम्रो अनुरोध के छ भने कृष्ण गौतमको नाममा एउटा प्रतिस्ठान स्थापना गर्न पहल गर्दिनु होला । त्यसको निम्ति आर्थिक श्रोत जुटाउन हामि पनि सहयोग गर्नेछौं र हाम्रो तर्फबाट पनि योगदान गर्ने छौं ।
अन्त्यमा सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुको सफल कार्यकालको निम्ति शुभकामना ब्यक्त गर्दछु । धन्यबाद
साबिक हुवास गा बि स
वाड न ३ पैयुँ हटिया पर्बत